लगतारको हावाहुरी र बर्षाले किसानको सर्वश्व गुम्यो ! सरकार छ भन्ने अनुभुत होला त ? | Prabhavkari News
दमक/ सबैतिर दशैको रमझम थियो । किसानलाई पनि दशैं लागेको थियो । बर्षदिनको चाडपर्व आफ्नो गच्छे अनुसार मनाउने हामी नेपालीहरुको परम्परा हो । त्यहि परम्परा र सस्कृतीमा रमाईरहदा अहिले एकाएक किसानहरुलाई ठुलो समस्या आईपरेको छ । बज्रपात आई लागेको छ । यो कसैले निम्त्याको नभएर प्रकृतीले नै यो अवस्था ल्याएको हो । दमक तथा झापामात्र नभएर मुलकभर बर्षादले ठुलो जनधनको क्षति पुर्याइरहेको छ ।
दशैं सकिएसंगै खेतबारीमा पाक्न र पसाउन ठिक्क परेको धान काटेर दशैंका लागि लिएको ॠण तिर्ने सोच किसानमा रहेको थियो । तर विडम्बना मौसमले गर्दा अहिले महाबिपत्ती आएको छ । किसानको धानबाली देखि लिएर अन्य लगाएको नगदीबालि अकल्पनीय रुपमा विनाश भएको छ । किसानको पुरपुरोमा हात भएको छ । अब के गर्ने ? कसो गर्ने आपत् परेको छ । यहाँका राजनीतिक दल भनौ या सरकारका जिम्मेवार ब्याक्तिहरु आफ्नो कुर्सि बाहेक केहि हेर्दैनन् ।
अहिले देशमा तीन तहको सरकार रहेको छ । तर किसानलाई सरकारबाट त्यति ठुलो अपेक्षा र भर नै छैन । आजसम्म के नै गरेको छ र ? अब गर्ला भन्ने लाग्छ । किसानहरुको धानबालि तथा अन्य बालिमा पुगेको क्षतिको क्षतिपुर्ति त पाउन मुश्किल छ तर कुनै न कुनै राहत कार्यक्रम तत्काल घोषणा भएमा यसले किसानहरुको मानसिक तनावलाई कम गर्न सक्थ्यो । तर सरकारले यो गर्छ भन्ने कमैलाई मात्र विश्वास रहेको छ ।
सरकार तथा सरकारमा बसेकाहरु आफ्नो नाफाघाटा हेर्ने गर्छन् र फाईदा सोच्छन् । किसानबाट उनिहरुले फाईदा नै पाउदैनन् यसर्थ पनि सोच्दैनन् भन्ने किसानहरुको गुनासो रहेको छ । जनता तथा किसानहरुको बिषयमा सरकार भएको अनुभुत गर्न मुश्किल छ । अहिलेमात्र होइन प्रायजसो यस्तो बिपतिमा सधै नै उस्तै छ । तर यो पटक किसानहरुको मुख्यबालि, बर्षभर खाने अन्न नै उत्पादनमा ठुलो असर पर्न देखिएको छ । यसले हरेक किसानको दैनिकीमा असर पार्ने देखिन्छ ।
स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले तत्काल क्षतिको विवरण संकलन गरेर किसानहरुलाई जे राहत उपलब्ध गराउन सकिन्छ त्यो बिषयमा बोल्न आवश्यक रहेको छ । किसानमा पुगेको क्षतिको विकल्पमा सोहि बराबरको आम्दानी गराउनका लागि उपयुक्त कदम चाल्न आवश्यक रहेको छ । होइन भने धान लगाउन गरेको खर्चको ॠण तिर्न नसकेर किसान मर्माहत बन्नेछ । राजनीतिभन्दा माथि उठेर किसानहरुको मर्का बुझ्न किसानको घरदैलोमा सरकार आउनु पर्छ । सरकार मेरो साथमा छ भनेर किसान ढुक्क बन्नु पर्ने अवस्था आउछ । तर मलाई लाग्छ यो दिवस्वप्न मात्र पनि हुनसक्छ । यो मेरो सोचाइ दिवस्वप्न नहोस ।
बालि बिमा लगायतको बिषयमा किसानहरुलाई सचेतना फैलाएको भए आज किसानले क्षतिको क्षतिपुर्ति पाउने थिए । राजनीतिक दलका नेता तथा अगुवा कार्यकर्ता भन्नेहरुले भोट बाहेक केहि पनि अन्य बिषय किसानलाई न बुझाउन चाहे, न बुझाउन कोशिस नै गरे । जसले गर्दा अब किसानहरुको क्षतिको भर्पाई कहाँबाट होला ? साच्चै भन्ने हो भने यो बिपतमा गरिब तथा किसानहरुको नै सर्वश्व जाने गरेको छ ।